Tahina Fy’Deliko Ambasadaoron'ny Stileex-Openflex
Fandraharahana eto Madagasikara Olana ny tsy fisian’ny fanabeazana ara-bola
Nisy ny atrikasa fanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny Stratejia Nasionaly ho fampidirana ny rehetra ho ao amin’ny rafitra mpampindram-bola (SNIM) ho an’ny taona 2018 ka hatramin’ny 2022 notanterahina tetsy amin’ny Hotely Colbert Antaninarenina omaly alarobia 14 novambra.
Fampandrosoana ara-toekarena Ilaina ny fampivoarana ny Indostria Malagasy
Tokony hifantoka tanteraka amin’ny fampandrosoana amin’izay ny Malagasy ary vonona i Korea Atsimo hanohana, indrindra ny amin’ny lafiny toekarena.
Fikambanan’ny vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara Hiezaka hanome lanja hatrany ny vokatra Malagasy
Nisy ny atrikasa nataon’ny Fikambanam-behivavy Mpandraharaha eto Madagasikara (GFEM) omaly alatsinainy 12 novambra tetsy amin’ny Hotely Le Pave Antaninarenina.
Harena ankibon’ny tanin’i Madagasikara Ny vahiny no tena migoka ny tombony
Toekarena eto Madagasikara Iza no filoha afaka hanarina izany ?
Hiaraha-mahita fa tsy tafavoaka i Madagasikara manoloana ny zava-misy ara-toekarena ankehitriny.
Foara nokarakarain’ny FJKM Fahombiazana tanteraka, afa-po ny mpitsidika
Nifarana ny sabotsy 3 novambra lasa teo rehefa naharitra telo andro ilay hetsika Haona Fi, foara nokarakarain’ny fiangonana Fjkm nentina nampihaonana ny fiarahamonina teny amin’ny village voara Andohatapenaka.
Tsy zoviana amintsika intsony i Tahina, ilay tovolahy nibata ny amboara Anzisha momba ny fandraharahana “Prize 2016” tany Afrika Atsimo. Randriarimanana Tahiana Heritiana no anarany feno, 24 taona izy ary manam-bady aman-janaka.
Tompon'ny orinasa Fiombonana, izay ny famokarana fraomazy no tena nahafantarana azy. Nandritra izay fotoana fahanginana kely roa taona izay, dia niezaka ny nanatsara sy nampitombo ny vokatra izy ahafahany mivelatra kokoa. Ao anatin'izany ny fanatsarana ny fonosan'ireo vokatra sy ny famoahana vokatra hafa. Isan’izany ny fraomazy sy ny ranom-boakazo izay mitondra ny marika “Fy'Deliko”, ny tantely izay mitondra ny marika Taksa, ny sokolà, ny kaonfitiora sy ireo hanitra ho an'ny sakafo maro samihafa toy ny sakay, ny sakamalao,.... Mikaroka tokoa mba hanomezany fahafaham-po ny mpanjifa izy. Manana faniriana ny hampiditra vokatra amin'ireny toeram-pivarotana lehibe ireny ahafahany mampafantatra ny vokany izay tsy mitsahatra ny mihatsara isan'andro isan'andro. Manana vina izy fa amin'ny taona ho avy dia efa hanjifa ny vokany, izay vokatra malagasy daholo isika ka hifandrimbona asa amin'ireo mpandraharaha Malagasy. Stileex, ilay gazetin'ny aterineto tsara rindra sy kalitao dia nisafidy ny hiara-hiasa aminy satria hita fa tena olo-mendrika tsara ho atao modely i Tahiana. Stileex moa dia mirona amin'ny fanampiana ny fivelaran'ny nomerika sy ny fandrahararana eto Madagasikara sy Afrika. Noho izany, nisafidy ny hiara hiasa ireto farany. Ho marik'izany, notoloran'ny Stileex rindram-baiko Openflex araka izay ilainy sy fanofanana manokana i Tahina mba ahafahany manatsara ny fitantanana eo anivon'ny orinasany.